Handoa saran'ny mpikambana
Bokin'i Momo Jaomanonga
Tetikasa efa vita
diego suarez in the world
pain de sucre de diego
Hetsika ho an’ny Diego, fa ahoana ?
Hetsika ho an’ny Fanabeazana
Madagasikara dia anisan’ireo Firenena mahantra indrindra maneran-tany, misy olana lehibe avokoa ny sehatra rehetra na ara-tsosialy, na ara-toe-karena, na ara-politika. Fanabeazana ny Malagasy dia tsy voatsimbina amin’ny fahoriana be io na dia manana sekoly maro sy sekolim-panjakana. Ny sitrapo sy faharetan’ny mpampianatra dia tsy mahafeno ny tsy fahampian’ny ho enti-manana mianjady amin’ny andrim-panjakana ireo.
Hetsika hoan’ny fanabeazana, fanampiana andrim-panjakana malagasy mba hanome ny ankizy ny fahafahana ho tonga mpandray anjara mavitrika ao amin'ny fanovana ny fiaraha-monina misy azy. Hetsika hoan’ny fanabeazana izany koa dia fanampiana ny ankizy Malagasy rehetra eo ny fikarohany fahalalana amin'ny alalan'ny famporisihana azy ireo handeha any an-tsekoly, izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanomezana ho an'ireo izay tena mila azy.
Ny tanjona dia ny : Hampivelatra ny fahalalana ara-tsaina, ny fahaizana, ny talenta voajanahary. Hampiomanana azy handray sy hiatrika andraikitra ho avy. Hanavaozana sy hampandrosoana ny fomba fisainana. Hahazahoana fahamatoarana ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny mpianatra. Hampivoarana ny toe-tsaina tia mamorona. Hanamafisana ny fifandraisana ara-tsosialy. Hisorohana sy hitondrana ny tsy fitoviana ara-batana, ara-tsaina, ara-kolontsaina ary ara-piaraha-monina.
Hetsika ho an’ny Tanora
Rehefa niaina ampahany amin'ny fahazazany eto Madagasikara ary avy eo dia nahita any an-kafa (any Eoropa na any Amerika), dia matetika rovitra eo amin'ny fihetseham-po roa momba Madagasikara. Etsy andaniny dia manana ny fahatsiarovana fahazazana sambatra tsisy olana mikasika tany-fiaviana, na mikasika fivavahan’ny tsirairay no sady tsisy ady amin'ny firenena manodidina ary etsy ankilany ny fahatsiarovana ireo tanora tavela ho an'ny tenany, indraindray zara raha mahatampitra ny fahatanorany dia tonga olon-dehibe oloham-potoana.
Hoan'ny arivony ny tanoran’ny Antsiranana, ny fahatanorana dia : midika fihatsehana ny asarotam-piainana nefa mbola kely loatra amy fitadiavana vahaolana ; midika fanaovana safidy handao ny sekoly sy fanomboana fitadiavam-bola ho an'ny zazalahy ary famelana ny fianarany noho ny voka oloham-potoana ary indraindray aza miteraka fivarotan-tena ho an'ny ankizivavy.
Hetsika ho an'ny tanora dia ny manome fanantenana ho an'ny tanora, ary maneho hoe fa misy fomba fanao hafa, anisan'izany ny fampianarana amin'ny alalan'ny lalana mahazatra (sekoly, kolejy, oniversite), ny fianarana asa izay lasa tanteraka noho ny fivoaran’ny teknolojia, ny famoronana ny raharaha any amin’ny zavakanto, ny fizahan-tany na ireo raharaha rehetra notsorina avy amin’ny fanatontoloana.
Noho ireo tanorany, Antsiranana dia afaka maneho ohatra hoan’ny hafa fa tokony hampiana izy amin’izany. Mety ho tratraizany tanjona izany amin'ny alalan'ny fanentanana fampielezan-kevitra, fanomezana fitaovam-pianarana, ny solosaina hafana mianatra na fifandraisana aterineto mba hafany izy ireo miditra amin’ny fahalalana maneran-tany.
Hetsika ho an’ny Hoavy
Nohon’ny 65% ny tahan'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, Madagasikara dia tsy maintsy manao misimisy kokoa amin’ny fampianarana ny tanora mba hanomanana ny hoavy mpitantana, ho avy ny manam-pahefana ambony sy ny mpitondra. Izao no fotoana tokony hanaovana zavatra raha te hanome anjara bebe kokoa hoan’ny Madagasikara amin'ny ho avy.
Mihetsika hoan’ny hoavy dia midika manao zavatra ho an'ny ankizy ankehitriny, manome hery azy ireo mba hanan-kery ny hoavy, manome fahafana azy ireo amin’ny safidy izay ataony, fametsahana fahatokisana sy fanomezana andraikitra azy ireo mba hafany ho mandray anjara amin’ny hoavin'ny ny tanànany sy ny firenenany indray andro any.
Mihetsika hoan’ny hoavy dia mety aseho amin’ny hendrika maro, anisan’izany ny fanampiana zahay hanatanteraka ireo tetikasa rehetra ataonay na hanatevin-daharana ny fikambanana AGIR POUR DIEGO mba hampadrosoana ny tanànantsika. Andao hiara-hampandroso ny tanànantsika.
Agir pour Diego
44 avenue de la fouilleuse, 92500, rueil Malmaison, France
(0033)7. 68 .89 .28 .16
© Association AGIR POUR DIEGO 2016-2018